Yiling Group Company dia sehatra iray manan-danja Shina nasionaly avo sy teknolojia vaovao ny orinasa. Nisy Profesora Wu naorin'i Yiling, akademisiana, mpitaiza ny doctorat mpianatra tamin'ny 1992.
Noho ny fitarihan'ny "vao fantatra ilay aretina sy ny Fitsaboana Fomba TCM mianto aretina" izay nidera ho Shinoa National intangible kolontsaina , Yiling orinasa vondrona miraikitra amin'ny fitsipiky ny nitondra TCM akademika fampandrosoana ny tosika ny fananganana orinasa, naka ny teknolojia ho toy ny mpialoha lalana, tsena ho toy ny mpitari-dalana , dia nanamboatra an'i miasa "dimy tamin'ny One" mode toy ny fampidirana fikarohana siantifika, pitsaboana fanao, famokarana, miara-barotra sy ny fampianarana.
Inona no kokoa, Yiling manana ekipa matanjaka fikarohana, izay ahitana 29 academicians any Shina, anisan'izany ny manam-pahaizana sangany hafa niverina, manam-pahaizana avy any ivelany, dokotera, tompo sy isan-karazany ny mpiasa matihanina.
Yiling fanafody orinasa , Shinoa fanafody voatanisa orinasa 50 (Stock Code: 002603), manana ny ankehitriny vokatra tsipika ny capsule, malefaka capsule, takelaka, granule, mitete tsindrona sns, dia fikarohana lehibe ny vokatra, ao anatin'izany ny: TCM, fikarakarana ara-pahasalamana ny vokatra, amin'ny rijan-andrefana sy TCM slices sns
Misy fanafody fanamarinana indrindra fa fivontosana (anticancer) -YangZhengXiaoJi (加链接) Capsule, izay manana mazava sy mafy vokatry ny homamiadana marary. Tamin'ny Oktobra 2017, ny Medical Center Research, naorin'i Yiling Vondrona Company sy ny Cardiff University ao amin'ny UK efa naoriny ho 4 taona.
Ny foibe mampivelatra ny fifandraisana lalina sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Sinoa fitsaboana manohitra fivontosana fikarohana, pitsaboana fampiharana & fizarana ny tsena loharanon-karena. Nanjary lalina izany rafitra fikarohana amin'ny fitsaboana Shinoa YangZhengXiaoJi Capsule, izay hita fa afaka manakana amim-pahombiazana isan-karazany fivontosana metastasis, indray manakana lalan-dra ao amin'ny fivontosana, eo ambany fitarihan'ny tsatòka teorian'ny aretina.
ShenLingLan, iray hafa karazana anticancer zava-mahadomelina, sarobidy ilaina ny fitsaboana nentim-paharazana Shinoa dia mety tsara ho an'ny marary roa fahampiana ny spleen sy ny voa, sy ny ra stasis toxin fanangonan-karena aloha sy aorian'ny radiotherapy sy ny fitsaboana simika. Afaka manatsara ara-tsaina harerahana, reraka, kamo, tena lanjany sy ny sisa.
JinLiDa granule, ho voan'ny diabeta Sokajy 2 Qi sy Yin fahampiana aretina, ny soritr'aretina: mangetaheta mba hisotro, polyorexia, manome urine, tsikelikely ny tena manify, reraka, tsemboka, Fanre, mitohana sns
Bazi tonifying capsules voa, voa tonifying sy ny fiakaran'ny maripanan'ny Yang. Azo ampiharina ny voa Yang fahampiana vokatry ny andilany sy ny lohalika fanaintainana, fanina sy tinnitus, Shenpi reraka, fanadinoana, tsy fitiavany maizina ho mangatsiaka.
Jujuboside Oil capsule. Sakafo ara-pahasalamana tsara fanahy iray natao ho capsule endrika, Zizyphus kily voam hanafohezany ilay menaka dia afaka ny fotoam-torimaso latency, ary hampitombo ny fotoana sy ny ambaratongam-miadana onja torimaso, izany hoe marivo torimaso sy ny torimaso lalina. Tena miasa. Maro ny taratasy no tatitra.
By izao, Yiling vokatra no aondrana any Korea Atsimo, Vietnam, Angletera, Kanada, Holandy, Singapore, Rosia sy ny sisa.
Yiling Hospital rehefa afaka 20 taona ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny mitsambikina sy ny faritry efa lasa maoderina, Integrated Sinoa sy fitsaboana tandrefana mitambatra hopitaly izay no ambaratonga avo indrindra amin'ny TCM miasa any Shina.
Fitsaboana ny hozatra atrophy vaovao fandalinana ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny Sinoa-pirenena nentim-paharazana sinoa fanafody fitantanana manam-pahaizana manokana ifantohan'ny - hozatra atrophy ho an'ny firenena nentin-drazana Shinoa fanafody fitantanana pahaizana manokana ifantohan'ny, ny hozatra atrophy mitohy ny fanabeazana fototra, natokana ho maotera neuron aretina, myasthenia gravis, hozatra dystrophy aretina sy ny sclérose en plaques sy ny atidoha aretina.
Department of rheumatology for Hebei Province manan-danja manokana ny nentin-drazana Shinoa fitsaboana, ny fampiasana ny anatiny sy ivelany fitsaboana, ka nahatratra ny vokany tsara eo amin'ny fitsaboana ny scleroderma, polymyositis, Sjogren aretin'ny, Behcet ny aretina, rheumatism, rohana mamely ny aretina, ankylosing spondylitis aretina ny fitambaran'ny sy eo an-toerana maneran-tany.
Oncology sampan-draharahan'ny (加链接) Mitambatra TCM sy ny tandrefana miaraka fanafody, nitondrany soa aman-tsara ny homamiadana marary an'arivony manerana izao tontolo izao. Fa samy hafa ny homamiadana marary dingana mandany fomba fitsaboana hafa, mba hanampiana ny marary fanatsarana ny hery fanefitra, hanatsara kapila bitika, manatsara velona sy ho maro tsara ny fiainana. Tsara indrindra amin'ny fitsaboana kanseran'ny nono, Colorectal kansera, prostate kanseran'ny, kanseran'ny havokavoka, gastric kansera sy ny kansera.
Angiocardiopathy Sampan-draharahan'ny, fototra National TCM Clinical departemanta, fikarohana ary mametraka andiana fanafody eo ambany fitarihan 'ny fihadiana teorian'ny ny akademisiana Wu Yiling mba hisorohana sy hitsaboana aretim-po amin'ny alalan'ny fitambaran'ny ny nentim-paharazana sinoa sy andrefana fanafody, indrindra fa ho an'ny mpanelira aretim-po, arrhythmia ary mitaiza fo tsy fahombiazana. Samy fanehoana sy ny mahatonga ny aretina azo tsaboina, ary ny lafiny ara-pahasalamana dia malaza.
Diabeta Sampan-draharahan'ny, dia manan-danja iray amin'ireo panjakana misahana ny Nentim-paharazana sinoa Fitsaboana, mametraka vaovao hevitry ny "hahasitrana ny voan'ny diabeta eo imason'Andriamanitra ny spleen teorian'ny" sy formulates ny vaovao fomba "mahavelona spleen sy ny vatana tsiranoka + smoothing fihadiana" mba hitsaboana diabeta sy ny lalan-dra fahasarotana eo ambany fitarihan'ny fihadiana teorian'ny. Ny vokany dia miavaka mahasalama.
Yiling Health Center : Yiling Health Town amin'ny 'asa fanadiovana y niantoka fahasalamana fiarovana kolontsaina', araka ny tari-dalana izay mampifangaro ny fahasalamana fiarovana ara-kolontsaina traikefa, ny fahasalamana fiarovana tetikasa traikefa, ny fahasalamana fitantanana, nasongadina zava-mahadomelina, ny fahasalamana ny torimaso, ny fahasalamana fiarovana sy ny fialan-tsasatra-fandaniana, ny fahasalamana fiantsenana sy ny raharaham-barotra fampirantiana, ary ny iray-mijanona sehatra ho an'ny fiarovana ara-pahasalamana.
Ny trano fandraisam-bahiny kintana dimy, ny foto-kevitra ara-pahasalamana voalohany Hotel any Shina, dia manana trano fisakafoanana Shinoa sy ny sakafo tandrefana fisakafoanana, dia misy fahasalamana ao amin'ny tsenambarotra. Ny fototry ny asa, ny tena zavatra manokana momba ny Yiling Health Center, ao aminy sy ny manam-pahaizana manokana miasa TCM manam-pahaizana samihafa miasa amin'ny aretina samihafa.
Eto dia afaka mahatsapa ny tena velona aina tontolo iainana, indrindra tompon'andraikitra manam-pahaizana sy za-draharaha no ho rainao mpitaiza ny fahasalamanao.
Yiling pahasalamana Center , maoderina fanadinana fahasalamana, tontolo iainana dia manana fahasalamana tsara tarehy amin'ny fitantanana foibe efa mandroso trano mba afaka mahazo ny VIP fitsaboana.
Tetikasa fanadihadiana toetra ny: jereo harato sy hamantarana, voromahery milalao ny fahasalamana toerana misy ny tena scanning, fihadiana ra manontolo sambo tratra, indray mitete-drà tratra, Gene tratra, diabeta mety projection, TCM Constitution famantarana.
Yiling International Travel Agency, manome visa ho fanompoana, conselltion fiantohana, tapakila, famandrihana trano fandraisam-bahiny fanompoana, fanompoana ny fizahan-tany iraisam-pirenena sy ny fahafahana misafidy Travel service entana.
Ho an'ny marary : afaka ny ho tonga ianao, ary mahazo ny fitsaboana tafiditra, na TCM & Western Fitsaboana, sy ny sakafo, ilaina, fanazaran-tena, fitsaboana aretin-tsaina, lafiny rehetra mahakasika ny fahasalamana dia afaka ho raisina an-drafitra fitsaboana.
Fa ny zana-ara-pahasalamana ny olona : Hianao no salama tsara, tsy salama loatra fotsiny, mila fitsaharana tsara, mety fisainan'i momba ny fahasalamana, dia ho velona avy any Yiling Health Center, dia hampiasa TCM mba hikarakara anao.
Fa ny olona izay mila fandinihana ara-pitsaboana tsy tapaka : ho avy haka ny diany ara-pitsaboana, dia ho manam-pahaizana ara-pahasalamana fitantanana ny fiainanao rehetra. Fanairana isika tany am-boalohany no fampitandremana ho an'ny fahasalamana, hitondra ny zana-fahasalamana dieny tsy mbola tonga ho aretina.
Ny zava-drehetra tokony ho tsara tarehy mamorona tranonkala